बजेट सीमित गरेर शिक्षालाई अचेट्दै सरकारहरु - Aayo Raibar
बजेट सीमित गरेर शिक्षालाई अचेट्दै सरकारहरु
in बहस, मुख्य समाचार, विचार/ब्लग, शिक्षा
दाङको मेरो मित्र भरत पाण्डेले समयसमयमा समय मिलाएर फोन गर्नु हुन्छ मलाई । फोनमा भलाकुसारी हुन्छ । मैले वहाँको परिवार र समग्र दाङतिरको कुरा सोध्छु । वहाँले पनि मेरो र मेरो परिवारको हालखवर सोध्नु हुन्छ । यस्तै भलाकुसारीको क्रममा मैले एकपटक उहाँको छोराको हालखवर र पढाइको कुरा सोधेको थिएँ । त्यत्तिबेला भने उहाँले ‘पढाइमा त्यत्ति जाँगर गरेन, अरु त ठीकै छ’ भन्नुभयो । उहाँको यो भनाइमा दम थिएन, न त उत्साह नै थियो । मैले मित्रको यो कुरा बुझेर उहाँलाई क्रमैसँग भनें – ‘तपाईको छोराले सायद अरुले जस्तो घोक्न सकेन होला । घोकेर उत्तरपुस्तिकामा खरर लेख्ने र सोधेको बेला फरर भन्ने काम पनि गरेन होला । त्यसकारण तपाइले आफ्नो छोरालाई पढाइमा त्यत्ति जाँगर गरेन भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईले उसको मनभित्र पसेर उसको रुचि र मनको भावना बुझ्ने प्रयास गर्नु भयो कहिल्यै ? के तपाईले भने झै पढाइमा राम्रा भनिएकाहरु सबै उनीहरुको जीवनमा पनि राम्रै भएका छन् त ? के तपाइले पढाइमा त्यत्ति जाँगर नगरेका भनिएकाहरु जीवनमा नराम्रै भएका छन् त ?’
मेरा प्रश्नहरुले मित्र पाण्डेलाई गम्भीर बनाएछ । उहाँले पढाइमा राम्रा भनिएका र नराम्रा भनिएका आफ्ना सखाहरुको जीवनचर्यातिर घुम्न थाल्नु भएछ । फोनमा मैले यस्तै कुरा गरिरहँदा मसँग हजूर हजूर भन्नु त भयो तर खासै त्यत्ति बोल्नु भएन । उहाँ नबोलेको अवसर छोपेर मैले मेरा भावनाहरु पस्कदै गएँ – ‘एउटा हात्ती र बाँदरलाई रुख चढ्ने प्रतिष्पर्धा गराइयो भने उक्त प्रतिष्पर्धामा बाँदरले जित्छ र हात्तीले हार्छ । तर के हात्तीलाई बाँदरभन्दा कमजोर भन्न मिल्छ ? विविधताले भरिएको यो संसारमा जन्मिदा नै हरेक व्यक्ति एवम् जीवात्माहरुले आफू बाँच्न सक्ने सामथ्र्य ल्याएर आएका छन् । यत्ति हो कि हामीले त्यसलाई पहिचान गरी र हुर्कन बढ्न दिने काम गर्न सकिरहेका छैनौं । हाम्रो शिक्षाले गर्न सकिरहेको छैन । अन्यथा हात्ती र बाँदरको तुलना गर्न नसकिएजस्तै हामीले बालबालिकाहरुको बीचमा तुलना गरेर सबल र कमजोर भन्ने काम कसैले पनि गरिनु हुदैन । सबै आ–आफ्नो हिसावले सबल छन् ।’ मैले मेरो कुराहरु यसरी समापन गरेपछि भरतजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘सर, हजूरले भनेका यिनै कुराहरु टिपोट गरेर भाइवर वा मेसेन्जरमा पठाइदिनु न ?’ मैले हुन्छ त भने तर अझैसम्म पनि पठाउन सकेको भने छैन ।
कुरो मेरा मित्र भरतजीको मात्र होइन, जुनसुकै परिवारका अग्रजहरु खुसी हुने र दुःखी हुने कारणहरुमा उक्त परिवारका सन्तानहरुले के गरिरहेका छन् ? कस्तो शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन् ? उनीहरुमा भएका सम्भावना र सक्षमताहरु के के छन् ? उनीहरुको बारेमा विद्यालय र शिक्षा दिने मानिसहरुले के भन्ने गरेका छन् ? घरपरिवारमा सन्ततिहरुले कस्तो व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गरिरहेका छन् ? आदि जस्ता कुराहरुले अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । सारमा सन्ततिको शिक्षाले परिवारमा खुसी वा पिडामध्ये के कुराले घर गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । सामान्य गरीव किसानदेखि अमीरसम्मको परिवारमा करिव करिव खुसी निर्धारण गर्ने कुरा यस्तै यस्तै हुने गर्दछन् । परिवारमा मात्र होइन, समाज र राष्ट्रमा समेत शिक्षाले असर पार्दछ । शिक्षा कस्तो छ ? मुलुकले शिक्षालाई कसरी हेरिरहेको छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई मुलुकले प्राथमिकता दिएको छ वा छैन भन्ने भन्ने कुराले देशको भविष्यको भाग्य निर्धारण गरिहेको हुन्छ । त्यसैले पनि भारतको शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोगमा लेखिएको छ ः ‘कुनै पनि देशको गन्तव्यको आकृतिकरण त्यो देशका कक्षाकोठामा भइरहेका क्रियाकलापहरुले गर्दछन् ।’
परिवारका अभिभावकहरुलाई सन्ततिको शिक्षाको पिरलो भएपनि देशका अभिभावकहरुलाई भने शिक्षाको पिरलो रत्तिभर पनि छैन । लाग्छ, उनीहरुको नजरमा शिक्षा बिहानीको शीतको थोपा हो, जो सूर्योदय भएपछि सुकेर जान्छ । त्यसका बारेमा चिन्ता र चिन्तन गरिरहनु जरुरत छैन । त्यही भएर होला, सरकारहरुको बजेटमा पनि शिक्षा छैन भन्दा पनि हुन्छ । भएपनि शीतको थोपा जस्तै गरी व्यवहार गरिएको छ । देशमा नयाँ सरकार आउदा शिक्षाको जिम्मा कसले लिने भन्ने बारेमा समेत कसैको निम्ति सरोकारको विषय हुदैन । सानो दृष्टान्त भन्नु पर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा साउनको अन्तीमतिर सञ्चालन गर्नेगरी सरकारसमक्ष निर्णय गर्नका सिफारिस पठाएको छ । त्यसलाई हेर्ने र त्यो बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन कसैलाई । कोरोनाको सङक्रमण केही कम भएको अहिलेको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएन र फेरि कोरोनाको सङक्रमण बढ्न थाल्यो भने विद्यार्थीहरुको कक्षा १२ को परीक्षाले मङ्सीर पौष भन्दा अघि हुन सक्दैन । यसरी चारलाख भन्दा बढि विद्यार्थीहरुको भविष्यको बारेमा सरकारलाई रत्तिभर मतलव छैन । यस्तो लाग्छ कि सरकार उनीहरुको अभिभावक नै होइन ।
कर्णाली प्रदेशको दश वर्षे योजना निर्माण गर्ने कार्यमा सङ्लग्न हुँदाको अवस्थामा सरकारले शिक्षालाई वेवास्ता गरेका तथ्याङकहरुसँग समेत घुलमिल हुने अवसर प्राप्त भयो । यसले झनै मन तीतो बनायो । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल बजेटको २.६ प्रतिसत बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आएर त्यही बजेटको प्रतिसत पनि घटेर २.५ प्रतिसतमा झरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शिक्षाको बजेटको प्रतिसत अलिकति बढेर ३.६ प्रतिसत देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आएर शिक्षामा कुल बजेटको ३.९ प्रतिसत बजेट अनुमान गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन, अरु प्रदेशमा समेत अवस्था यस्तै छ । आव २०७६/७७ र २०७७/७८ मा पाँच ओटा प्रदेशले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट कुल प्रदेश बजेटको १.७ देखि ४.२ प्रतिशत र औषतमा २.६४ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । त्यत्तिमात्र नभइ पालिकाहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ८० वटा स्थानीयतहले उनीहरूको आम्दानीबाट ०.१२ प्रतिसत देखि ३२.५४ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याएकोमा औषतमा यो बजेट ५.४३ प्रतिसत मात्र हुन आउछ । सिङ्गो मुलुकको वि.सं. २०४९/५० मा शिक्षामा राज्यको लगानी कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ८.५ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा आइपुग्दा यो प्रतिशत १७.१ पुगेको थियो । अहिले आएर पुनः १०÷११ प्रतिसतमा झरेको अवस्था छ ।
शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनु भनेको बालबालिका लगायत आफ्ना सन्ततिहरुलाई पनि प्राथमिकता नदिनु हो । शिक्षालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई पनि प्राथमिकता नदिनु हो । राजनीति गर्नु प¥यो भने राजनेताहरुलाई विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरु चाहिने गरेका छन् । त्यसैले शिक्षकहरुलाई पनि आफ्ना आफ्ना भागमा कति छन् भनेर प्रष्ट देखिने गरी छुट्याएर राखेको अवस्था छ । सरकारमा जो गएपनि सरकारप्रति नरम हुने शिक्षकको एउटा खण्डको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त खण्डले बाहिर कराए जस्तो गरेपनि भित्र गएर सरकारसँग उसको मिलेमतो नजीकको हुने गर्दछ । यसले गर्दा शिक्षामा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । अरु त के कुरा विद्यार्थी नभएका विद्यालय र जिल्लाबाट विद्यार्थी भएको जिल्ला र विद्यालयमा जानेगरी शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलान र शिक्षकको सरुवा गर्न समेत सकेको छैन । काम गर्ने र नगर्ने शिक्षकको भेद छुट्याउन सकेको छैन । शिक्षक सरुवा लगायत विद्यालयको प्र.अ. बनाउने सवालमा समेत भागवण्डाको ख्याल गरी क्यालकुलेटर थिच्ने गरिन्छ । केही गरौं भन्ने सोच भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि संघीय शिक्षा ऐन नआउदा थला परेर सकिदै गरेको अवस्था छ ।
शिक्षकहरुको यो गति भएपछि विद्यार्थीहरुको गति गतिलो हुने त कुरै भएन । कतिपय विद्यार्थीहरुलाई त आफ्नो विद्यालयको डे«स लगाएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा शिक्षकहरुले चिन्दा पनि चिन्दैनन् । स्थिति यस्तो भएपछि विद्यार्थीको अवस्था, उसको रुचि, क्षमता र सम्भावनाहरुको पहिचान गर्ने कसरी र गर्ने कसले ? को विद्यार्थी कस्तो छ भन्ने कुरा एकैचोटी पेपर पेन्सिल टेष्ट लिएर नतिजा निकालेपछि मात्र थाह हुन्छ कि कसले घोक्न सक्दो रहेछ र कस्ले घोक्न सक्दो रहेनछ । त्यसैका आधारमा जेहेन्दार र कमजोरको ट्याग लगाउने गरिन्छ उनीहरुलाई । अनि यसैका आधारमा अभिभावकले पनि आफ्नो सन्ततिलाई मित्र भरतले झै अब्बल र कमजोर भनेर खुसी हुने वा पुर्पुरोमा हात राख्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्दछन् । शिक्षा, बालबालिका र अभिभावकले यो सबै नियति भोगिरहनुको पछाडि सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता नदिनु नै प्रमुख कारण हो । लगानीको अवस्था हेर्दा शिक्षाले हुनेखानेको घरमा पालिएको कुकुरको जति पनि सम्मान नपाएको अवस्था छ । गरीवको घरमा कलो खाने गरी पालिएको कुकुरको झै हालत छ शिक्षाको । जिम्मेवारी धेरै, अवस्था भने भोकभोकै । त्यही भएर नै शिक्षाले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यही भएरै देशको विकासको गति पनि भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ ।
लेखक शाह राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका प्रमुख हुन् ।
आज चार प्रदेशमा भारी वर्षा हुने
प्रधानमन्त्री देउवाले शुभारम्भ गरे जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप